ISentinel del Norte, isiqhingi samazimuzimu | Izindaba Zokuhamba
INorth Sentinel, isiqhingi samazimuzimu
UMariela Carril | | India
Lapho sikanye neselula yethu esandleni, sixhumeke ngokuxhuma, sicabanga ukuthi umhlaba mncane futhi unamuhla nokuthi sesivele sikhona ngekhulu lama-XNUMX. Kepha iqiniso ukuthi umhlaba usabanzi futhi lokho Kusekhona amakhona kude nesimanjemanje lapho abantu baphila ngendlela efanayo ababehlala ngayo emakhulwini eminyaka adlule.
Elinye lalawa makhona kufayela le- Isla Sentinel kusuka eNyakatho, isiqhingi esincane eBay of Bengal esesiqhingini se-Andaman. Yaziwa njenge-zoo yabantu, kepha isikhathi eside yaziwa njenge isiqhingi samazimuzimu...
1 Isiqhingi saseNyakatho Sentinel
3 AbakwaSentinelese, amazimuzimu?
Isiqhingi saseNyakatho Sentinel
Njengoba ngishilo Kuyingxenye yeziqhingi ze- Andaman, iqembu leziqhingi okungukuthi eBay of Bengal jika utholakala phakathi kweMyanmar neNdiya. Eziningi zalezi ziqhingi zakha i-Andaman Territory kanye neNicobar Islands, ngaphakathi kweNdiya.
Abantu abahlala kulo baye baba nalo ngempela ukuxhumana okuncane kakhulu nabanye abantu kuwo wonke umlando wabo futhi baziwa njenge USentinelese. Ngokuyisisekelo kuyisizwe se abazingeli nabaqoqi futhi ngenxa yalokho iphila ngokuzingela, ukudoba kanye nezimbali zasendaweni.
Abazingeli nabaqoqi, hhayi abalimi. Abawulimi umhlaba futhi kunenkolelo yokuthi abakazisunguli izindlela zokubasa imililo. ngakho-ke izazi zesayensi yabantu zikubheka lokho bahlala esimweni esidala.
Abasilo iqembu elikhulu yize singeke sashiwo isibalo esiqondile, esiphakathi kwabantu abangama-50 nabangu-500. Akukaziwa nokuthi i-tsunami yango-2004 yabathinta kanjani, ngakho-ke kuncane okwaziwayo ngabo.
AbakwaSentinelese bavela umbala omnyama, izinwele ezimfushane nezine-afro. Okuncane okwaziwayo ngabo kusalokhu okufundwe koxhumana nabo abambalwa kakhulu ngasekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule: bahlala ezindlini ezingenazo izingxenyeni zangaphakathi, phansi kwenziwa ngamahlumela esundu, futhi awekho makhulu. Imindeni yabelana kanye futhi kukhona iqhugwane elikhulu lemibuthano yenkolo nemicikilisho.
Laba bantu akazi umsebenzi wensimbi ngoba empeleni azikho izinsimbi kulesi siqhingi, ngakho-ke okuncane abanakho kwensimbi kubonakala sengathi yilokhu obekuvela ogwini lwabo. Lokhu kwenzeka ngababhangisi bezimpahla ababezithela othulini lwamakhorali olwaluseduze futhi okuqukethwe kwabo kwabanikeza izinto zensimbi.
Lesi siqhingi sinamachibi amathathu ngakho-ke amaSentinelese akufanele ngisho adobe olwandle ngale kwemifula yamakhorali ebavikelayo. Bacindezela izihlenga zabo ngezigwedlo ezithinta phansi hhayi okunye.
Ukuxhumana nabantu bakwamanye amazwe bekukuncane kanye nemiphumela ehlukahlukene: amaNgisi afika ekupheleni kwekhulu le-XIX futhi athatha iziboshwa zicabanga ukuzibuyisa nezipho ezibalulekile. Kepha abashonile bashonile ngakho babuyisa izingane ezimbili, nezipho yebo, ezanyamalala ngokushesha zangena ehlathini. Kubonakala sengathi abaseBrithani babengenasithakazelo esikhulu kulesi siqhingi ngoba abaphindanga babuya.
Ngama-60s wekhulu lama-XNUMX amaNdiya abuya kodwa i- USentinelese bangene ehlathini futhi abakwazanga ukuxhumana nabo. Kamuva uMbutho Wezempi WaseNdiya wabamba ihange eduze washiya izipho ezithile ogwini. Kakade ngeminyaka yama-70s i-expedition ye-anthropologists yazama futhi, ngenhlanhla engcono, kodwa akukho lutho olubalulekile abakwazile ukukuthola.
Into ehlekisayo ngakho konke lokhu ukuthi ngo-1974 babuya nethimba le- National I-Geographic kanti oSentinele baphume ezimpambanweni zomgwaqo bebahlasela ngemicibisholo. Ngesikhathi abaseSpain eMelika bebashiyela amathoyizi, izitsha zasekhishini, ukhukhunathi ngisho nengulube ephilayo. Imicibisholo yaphinde yandiza futhi eyodwa yalimaza umqondisi wedokhumentari ...
Kwakuneminyaka yama-90s kuphela leyo USentinelese badedela imikhumbi isondele kancane kepha hhayi impela. Ekugcineni uhulumeni waseNdiya wayeka ukuzama ukuxhumanaNgakho-ke, akucaci nokuthi i-tsunami yango-2004 yabathinta kanjani.
Kakade ngekhulu lama-XNUMX kuyaziwa ukuthi babulala abadobi abambalwa ababedinga ukulala khona nokuthi bathuse izindiza ezinophephela emhlane ngamatshe nangemicibisholo. Noma ngubani ofuna ukuzwa uyezwa, akunjalo? Kusobala impela ukuthi laba bantu abafuni ukwazi lutho ngalokhu esikubiza ngokuthi Impucuko.
Kwabanye luhlobo oluthile lomcebo, kwabanye a i-zoo yabantu. Ukuthi izazi zesayensi yabantu zikholelwa lokho Los USentinelese Bahlale esiqhingini cishe iminyaka eyizinkulungwane ezingama-65Lokho kungukuthi, iminyaka eyizinkulungwane ezingama-35 ngaphambi kwe-Ice Age yokugcina neminyaka eyizinkulungwane ezingama-55 ngaphambi kokunyamalala kwama-mammoth aseNyakatho Melika kanye nezinkulungwane ezingama-62 ngaphambi kokuba kuthiwe kwakhiwa amapiramidi.
Kukholelwa ukuthi laba bantu bavela ngqo kubantu bokuqala abaphuma e-Afrika ngakho-ke kuhle kakhulu. Izazi ze-anthropologists nazo zinomqondo ngokuziphatha kwazo okunolaka nokuvaliwe: lesi siqhingi sisendleleni yemizila eminingi yasendulo phakathi kweYurophu, iMiddle East neSoutheast Asia, nemizila yezigqila futhi, ngakho-ke bacabanga ukuthi ngenxa yokubukeka kwabo kwe-Afro kumele ngabe bazamile ukwehla nokubamba abantu.
Ngakho-ke inzondo yakhe nesifiso sakhe sokuhlala ngaphandle komhlaba. Kepha luvelaphi udumo lwabo njengamazimuzimu?
Lolu dumo futhi kuye kwadingeka ukuthi lubavikele kubantu bakwamanye amazwe abafuna ukwazi noma kubanikazi bezigqila. Bekuhlale kunamahlebezi azungeze le ndawo ukuthi abantu base-Andaman Islands badla abantu. Abukho ubufakazi, kodwa Mhlawumbe umqondo uqhamuka eqinisweni lokuthi ezinye izizwe zisebenzisa amathambo okhokho bazo njengezinto zokuhloba. Izingebhezi zifakiwe!
UPtolemy, isazi sezinkanyezi esingumGreki, sakhuluma kudala ngekhulu lesibili leminyaka BC cishe isiqhingi samazimu eBay of Bengal ngakho-ke inganekwane yamazimuzimu yayihlala isakazwa phakathi kwamatilosi. Ngisho Marco Polo uchaze abantu besiqhingi jikelele ngokuthi 'umjaho wabangcwele kanye de abanobudlova ababulala futhi badle wonke owezizwe onyathela umhlaba wabo".
Okuncane lapha, okuncane lapho, abantu abahlotshiswe ngamathambo abantu ne-voila, sinenganekwane yamazimuzimu. Futhi sengathi lokho bekunganele, akekho ongazi ukuthi laba bantu bangasho ukuthi akulona iqiniso.
Kungenzeka singalokothi sinqamule emanzini eBay of Bengal ngakho-ke nginokuthile engingakusikisela kona: vula ikhompyutha yakho, uye kuGoogle Earth bese ubheka le ngxenye yomhlaba. Uzokwazi ukubona izithombe zesathelayithi zalesi siqhingi. Abakhombisi okuningi, kuyiqiniso, isiqhingi nje esinehlathi elicinene nesibalo somthumbi wezimpahla osele dengwane ngeminyaka yama-80s.
AmaSentinelese asekude nokubuka umhlaba, umhlaba lapho namuhla wonke umuntu ebuka wonke umuntu ... ngaphandle kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » India » INorth Sentinel, isiqhingi samazimuzimu